ဆိုဒ်များကိုအနှေးဖြစ်စေသောသေစေနိုင်သောအမှား ၉ Martech Zone
နှေးနှေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေလွှမ်းမိုးမှု ခုန်နှုန်းထားများ, ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများနှင့်ပင်သင်၏ search engine ကိုအဆင့်။ ထိုအရာကနှေးကွေးနေဆဲဖြစ်သောဆိုက်အရေအတွက်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ အာဒံကို GoDaddy တွင် ၁၀ စက္ကန့်ထက်ပိုကြာနေသည့် site တစ်ခုကိုယနေ့ပြသခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသောသူက၎င်းတို့သည် hosting တစ်ခုအတွက်တစ်စုံတစ်ရာသောချွေတာငွေကိုချွေတာသည်ဟုထင်သည်။
ဒီမှာငါတို့စာဖတ်သူတွေကိုအတော်လေးကြီးထွားလာတယ်၊ ငါတို့ပြောင်းရွှေ့လာလို့အောင်မြင်မှုအချို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာသံသယမရှိဘူး Flywheelအလွန်ကြီးသော cache နှင့် WordPress ကိုစီမံခန့်ခွဲသောအိမ်ရှင် အကြောင်းအရာ Delivery Network မှ စွမ်းအားဖြင့် StackPath CDN.
သင်၏စာမျက်နှာကိုဖွင့်သည့်အချိန်ကိုတိုးစေသည့်သေစေနိုင်သောအမှား ၉ ခုရှိသည်။
ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိပါ - မြန်ဆန်မှုတိုးမြှင့်ရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Caching ကိုအသုံးပြုသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်အချက်အလက်များကိုဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုအတွင်းသိုလှောင်ထားပြီး outputted page ကိုထုတ်လုပ်ရန် design template များနှင့်ပေါင်းစည်းသည်။ ဒေတာဘေ့စ်တောင်းဆိုချက်နှင့်ထုတ်ဝေမှုသည်အကုန်အကျများပြီး၊ cache engine များသည် output ကိုပုံမှန်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါ။
လမ်းကြောင်းများလွန်း - အခြားစာမျက်နှာများသို့ပြန်သွားသော embedded resources များကိုရှောင်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အညွှန်းတွင်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာတစ်ခုမှာသင်၏ site သည်လုံခြုံမှုရှိပါက၊ သင်ကဲ့သို့ site ရှိ element အားလုံးကိုပုံများကဲ့သို့၎င်းတို့၏လုံခြုံမှုမရှိသော URL တွင်မဖော်ပြပါ။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိပုံတိုင်းကိုလုံခြုံသောလင့်ခ်သို့မှန်ကန်စွာပြန်ပို့ရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်သူမျှမ Minification - Script file နှင့် CSS ဖိုင်အရွယ်အစားများကိုမလိုအပ်သော element များလျှော့ချခြင်းဖြင့်ချုံ့နိုင်သည် (line feeds, comment, tabs နှင့် space) ။ ဤ element များကိုဖယ်ရှားခြင်းဟုခေါ်သည်။ အသေးအဖွဲ။ အချို့သော CMS စနစ်များသည် site ကို load နှင့် cache များအနေဖြင့်လည်းအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကြီးမားတဲ့ပုံများ - နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကင်မရာ (သို့) ဖုန်းမှဓါတ်ပုံများကို web သို့မကြာခဏ upload လုပ်လေ့ရှိသည်။ ပြproblemနာမှာ၎င်းပြproblemsနာများသည် megabytes မြောက်များစွာဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကိုစည်းတခုထည့်ပြီး၊ သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာဟာသိသိသာသာနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်။ တူရိယာများ ရိုက်သံ ပုံများကို upload မလုပ်မီသို့မဟုတ်ပုံများကိုအလိုအလျောက်ချုံ့ရန် site တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစည်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရုပ်ပုံအရွယ်အစားသေးငယ်သည်။
ဇာတိလူမှုရေးခလုတ်များ - ဇာတိလူမှုရေးခလုတ်များကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို social media site မှသီးခြားစီ load လုပ်ပြီး၎င်းတို့မည်မျှမြန်မြန် load လုပ်သည်ကိုအနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်သည်။ Third-party ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ ၄ င်းတို့၏ဝန်ကြာချိန်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ဆိုဒ်၏အမြန်နှုန်းကိုလုံး ၀ မသက်ရောက်စေရန်ခလုတ်များကိုတင်ပြီးပါပြီ။
CDN မရှိပါ - အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေသည့်ကွန်ယက်များသည်ပထဝီအနေအထားအရတည်ငြိမ်သောဖိုင်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆာဗာများရှိသည်။ အသုံးပြုခြင်း CDN အထူးသဖြင့်ရုပ်ပုံတွေအများကြီးရှိရင်၊ သင့်စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့စိတ်ကူးကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ infographic ပါ။9Page Load Time ကိုလျှော့ချရန်သိကောင်းစရာများကနေ TruConversion.
ထုတ်ဖော်: ငါဒီ post တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate လင့်ခ်အသုံးပြုခဲ့သည်။